Man City oo laacib muhiim ah ka raadinaysa Atletico Madrid – Gool FM
(Manchester) 15 Dis 2016 Kooxda Man City ee dalka ingiriiska ayaa doonaysa laacibka qadka dhexe ee kooxda Atletico Madrid Koke sida ay baahisay Marca.
Tababaraha kooxda City ee Pep Guardiola ayaa la dhacsan qaab ciyaareedka laacibka reer Spain, wuxuuna aad ugu hanwaynyahay inuu keeno kooxdiisa dhamaadka xiliciyaareed kan.
Qandaraaska Koke ee kooxda City waxaa lagu burburin karaa aduun dhan 125 milyan oo euro, laakiin maamulka Man City ayaan diyaar u ahayn inay bixiyaan qiimahaas qaaliga ah, waxayna qorshaynayaan inay la bilaabaan wadahadalo kooxdiisa Atletico Madrid.
Barcelona ayaa xili aad u doonaysay 24 jirkaan laakiin Koke ayaa go’aansaday inuu iska sii joogo kooxdiisa isaga oo 2014 qalinka ku duugay heshiis 5 sano ah.
Mesut Ozil oo Arsenal ka baryaya in kooxda lagu soo biiriyo xiddigan....